समस्या सिर्जना गर्दै TINA सँग सेट र असाइनमेन्ट
TINA सँग समस्या समाधान र असाइनमेन्टहरू सिर्जना गर्दै
निम्न ट्यूटोरियलले तपाइँलाई चार समस्याको निर्माण र TINA को प्रशिक्षण र परीक्षा मोडहरूमा प्रयोग गर्न सेटअप मार्फत कदम उठाउँछ।
1। चयन प्रकार समस्या सिर्जना गर्दै
TINA सुरू गर्नुहोस्।
तल सर्किट सिर्जना गर्नुहोस् वा लोड गर्नुहोस् (चयन.sch)।
दृश्य मेनु मार्फत TINA को परीक्षा प्रबन्धकलाई आमन्त्रित गर्नुहोस्।
वैकल्पिक चयन थप्न, थप्नुहोस् ... बटन थिच्नुहोस्। चयन सम्पादक संवाद देखा पर्नेछ र तपाईं इच्छित पाठ प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो चयन सही जवाफ हो भने, 'यो राम्रो जवाफ' फील्ड जाँच गर्नुहोस्।
पहिले प्रविष्ट गरिएको चयन सम्पादन गर्न, सम्पादन गर्नुहोस् ... बटन थिच्नुहोस्। उही सम्पादक संवाद देखा पर्नेछ। पहिले प्रविष्ट गरिएको समाधान मेटाउन, यसलाई हाइलाइट गर्नुहोस् र मेटाउने बटन थिच्नुहोस्।
तीन विकल्प थप्न पछि तपाईंले निम्न स्क्रिन देख्नुपर्छ:
सल्लाह (सङ्केत) व्यवस्थापन प्यानल प्रयोग गरेर, तपाईं विद्यार्थीको लागि संकेत थपेर समस्या बढाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ संकेतहरू समावेश गर्नुहुन्छ भने, तपाईं सङ्केतको प्रयोग गर्न दण्ड असाइन गर्न सक्नुहुन्छ। क्यान्सरको साथ संकेतको लागी, विद्यार्थीले अधिकतम सम्भावित अंकको कमीलाई स्वीकार गर्दछ। स्कोर र दण्ड दुवै प्रतिशतमा मापन गरिन्छ।
सल्लाह व्यवस्थापकको माथिल्लो दायाँ कुनामा वर्तमान सल्लाहको संख्या र सल्लाहहरूको कुल संख्या देखाउँछ। तपाइँ बायाँ र दाँया तीरसँग सल्लाहहरूमा सार्न सक्नुहुन्छ। सल्लाहको अर्डर महत्त्वपूर्ण छ: यो एकमात्र क्रम हो जुन विद्यार्थीले परीक्षा व्यवस्थापनमा उनीहरूको पहुँच गर्न सक्षम हुनेछ
सल्लाह सूचीको अन्त्यमा नयाँ सल्लाह थप्न, सल्लाहकार ट्याब चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि बटन बटन थिच्नुहोस्। सल्लाह सम्पादक संवाद प्रकट हुनेछ। तपाईं सल्लाह र दण्ड प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ (प्रतिशतमा)।
हालको सल्लाह भन्दा पहिले नयाँ सल्लाह सम्मिलित गर्न, सम्मिलित बटन थिच्नुहोस्। सल्लाह सम्पादक संवाद प्रकट हुनेछ।
वर्तमान सल्लाह मेटाउन, मेटाउने बटन थिच्नुहोस्।
हालको सल्लाह सम्पादन गर्न, सम्पादन बटन थिच्नुहोस्।
अन्तमा, चयन गर्नुहोस्.sch फाइल पूर्वनिर्धारित फोल्डरमा TEST को मुख्य फोल्डर अन्तर्गत TEST भनिन्छ।
2. डीसी समस्या सिर्जना गर्दै
तल सर्किट सिर्जना गर्नुहोस् वा लोड गर्नुहोस् (DCproblem.sch)।
ध्यान दिनुहोस् कि सर्किट एक चर तीर समावेश गर्दछ जुन सर्किट चर को संकेत गर्दछ जसको मूल्य भेटिन्छ। (तपाइँले एक एम्मेटेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।) सामान्यतया, हरेक डीसी समस्याको अज्ञात मात्राको लागि एक र एक मात्र साधन हुनुपर्छ। TINA को प्रशिक्षण र परीक्षा मोडमा, सर्कलमा राखिएको साधनहरूले मापन मूल्य देखाउँदैन, तर यसको सट्टा विद्यार्थीले यसको मूल्यको लागि सोध्नेछ।
तपाईँ समस्यामा संकेतहरू थप्न सक्नुहुन्छ (जस्तै चयन समस्याहरूको लागि वर्णन गरिएको)। जब भयो, यसलाई TINA को TEST फोल्डरमा बचत गर्नुहोस्।
3। AC समस्या सिर्जना गर्दै
AC समस्या डीसी समस्याहरु लाई धेरै नै समान छन्, तर निश्चित रूप देखि sinusoidal उत्तेजना र प्रतिक्रियाशील घटक शामिल हुनेछ। प्रशिक्षण र परीक्षा मोडहरूमा, कार्यक्रमले यन्त्र द्वारा संकेतित मानको परिमाण र चरणको लागि सोध्नेछ। उदाहरणको रूपमा, तल देखाइएको ACproblem.sch सिर्जना गर्नुहोस् वा लोड गर्नुहोस्, वा समान समस्या, TINA को टेस्ट फोल्डरमा।
4। समस्या निवारण समस्या सिर्जना गर्दै
तल सर्किट सिर्जना गर्नुहोस् वा लोड गर्नुहोस् (DCtroubleshooting.sch), र हेर्नुहोस् मेनुबाट मेनु हेर्नुहोस् मेनु।
सूचीबक्स प्रयोग गर्दै (शीर्षमा "मौलिक" प्रदर्शन), सर्किटको नयाँ संस्करण परीक्षा व्यवस्थापकको शीर्षमा सिर्जना गर्नुहोस्।
ध्यान दिनुहोस् कि यदि तपाईले हालको DCtroubleshoot.sch फाइल लोड गर्नुहुन्छ, संस्करण #1 पहिले नै अवस्थित हुनेछ।
अब तपाइँ संस्करण सूचीबक्स तल बायाँ-सबै बटन प्रयोग गरी कुनै पनि घटकमा दोषहरू सम्मिलित गर्न सक्नुहुन्छ।
बटन थिच्नुहोस्, र कर्सर स्क्र्रोड्राइभर प्रतीकमा परिवर्तन हुनेछ।
आवश्यक घटकमा यो कर्सर सार्नुहोस् (हाम्रो उदाहरणमा R1) र यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। घटकको सम्पत्ति सन्झ्याल देखा पर्नेछ।
तपाईंले Fault रेखा देख्नुभएन भने गुणस्तर विन्डो तल स्क्रोल गर्नुहोस्।
अब यो रेखाको बायाँ क्षेत्रमा क्लिक गर्नुहोस्। एउटा सानो सूचीबक्स प्रकट हुनेछ जहाँ तपाईं यो अवयवको लागि अनुमति गलतहरूबाट चयन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो उदाहरणको लागि, खोल्नुहोस् चयन गर्नुहोस् (खुला सर्कुइट घटक)।
गुण बाकसमा ठीक थिच्नुहोस्। तपाईंले यो सर्किटमा गल्ती गर्नुभयो। सर्किट को अन्य संस्करणहरु लाई विभिन्न दोषहरु संग जारी गर्न सक्नुहुन्छ। TINA यो विकल्प वैकल्पिक रूपमा प्रशिक्षण र परीक्षा मोडहरूमा प्रस्तुत गर्नेछ (तर तल हेर्नुहोस्)।
अन्तमा, परीक्षा प्रबन्धकको शीर्षमा सूचीबक्स प्रयोग गरेर मूल संस्करणमा स्विच गर्नुहोस् र सर्कस्टलाई DCtroubleshoot.sch को रूपमा TEST फोल्डरमा बचत गर्नुहोस्।
5। TINA को प्रशिक्षण र परीक्षा मोड को लागि समस्या सेट को अनुसार
TINA को प्रशिक्षण र परीक्षा मोडमा समस्या फाइलहरू प्रयोग गर्न, तिनीहरू समस्या सेटमा एकत्रित गर्नुपर्दछ। प्रशिक्षण र परीक्षा मोडमा, TINA एक समयमा सेट एक समस्या लोड हुनेछ। विद्यार्थीले लोड सेटबाट समस्याहरू चयन गर्न र समाधान गर्न निःशुल्क छ।
माथिको नयाँ समस्या सेटमा चार समस्याहरू सामेल गरौं।
TINA फोल्डरबाट कार्यसूची सम्पादक सुरू गर्नुहोस्।
निम्न सञ्झ्याल देखा पर्नेछ:
नाम फिल्डको बायाँ बस बायाँ बटन थिच्नुहोस्। पहिलो कार्यको पूर्वनिर्धारित नाम देखा पर्नेछ।
त्यो नाम परिवर्तन गर्नुहोस् (समस्या सेट प्रयोग गर्दा बायाँ र दायाँ तीरहरू देखा पर्दैन।)
फाइल क्षेत्रको छेउमा बटन थिच्नुहोस् र testselection.sch चयन गर्नुहोस्
समस्या छोड्नुहोस् चयनमा सेट गर्नुहोस्।
चयन चेकबक्स जाँच गरी छोड्नुहोस्।
तपाईंले पहिलो कार्य थप गर्नुभएको छ।
थिच्नुहोस् कार्य थप्नुहोस् बटन फेरि।
कार्यको नाम डीसी समस्यामा परिवर्तन गर्नुहोस् र फाइल testDCproblem चयन गर्नुहोस्।
सेट प्रकार लाई डीसी समस्या.
चयन चेकबक्स अनचेक गर्नुहोस्।
कार्यको नाम AC एसीमा परिवर्तन गर्नुहोस् र testACproblem लाई फाइल चयन गर्नुहोस्।
टाइप गर्नुहोस् AC को समस्यामा सेट गर्नुहोस्।
अब अन्तिम समस्या, समस्या निवारण प्रकार समस्या थप गर्नुहोस्, यस सेटमा।
फेरि कार्य बटन थिच्नुहोस्।
कार्यको नाम समस्या निवारणमा परिवर्तन गर्नुहोस् र फाइल testDCtroubleshooting चयन गर्नुहोस्।
समस्या निवारणमा टाइप गर्नुहोस्।
अन्य समस्या निवारण मापदण्डहरू प्रयोग गर्दै:
दोषहरू "डिफल्ट" सक्षम पारियो: घटकहरूमा राखिएको कुनै पनि गल्तीहरू प्रशिक्षण र परीक्षा मोडहरूमा TINA मा सक्षम छन्।
दोषहरू बन्द गरियो: यदि जाँच गरिएमा, विद्यार्थीले दोषहरू असक्षम गर्न सक्दैन। यदि जाँच गरिएन भने, विद्यार्थीले तिनीहरूलाई विश्लेषण / दोष सक्षम मेनु वस्तु प्रयोग गरेर असक्षम गर्न सक्दछ।
घातक सर्किट: यदि तपाइँ रमाइलो छान्नुहुन्छ भने, प्रोग्रामले सर्किट संस्करणहरूबाट अनियमित रूपमा चयन गर्नेछ अन्यथा, तपाईँले सर्किट संस्करण चयन गर्नु पर्छ (जस्तै, संस्करण # 1), र यो संस्करण प्रशिक्षण र परीक्षा मोडहरूमा प्रयोग गरिनेछ।
सर्किट सम्पादन गर्दै: यदि जाँच गरियो भने, सर्किट सम्पादन र परीक्षा मोडमा सम्पादन गर्न सकिन्छ।
अन्तमा, TINA को परीक्षण फोल्डरमा सेटअप समस्या tutorial.exa को रूपमा बचत गर्नुहोस्।
यस समस्या सेट प्रमाणित गर्न, TINA प्रशिक्षण वा TINA परीक्षा आइकनहरू प्रयोग गरेर TINA पुन: सुरु गर्नुहोस् र लोड tutorial.exa।
समस्या सेट देखा पर्नेछ। चल्तीको माध्यमबाट उनीहरूको शुद्धता पुष्टि गर्नका लागि चलौं।
1) यदि तपाइँ पहिलो कार्यमा डबलक्लिक गर्नुहुन्छ भने, निम्न स्क्रिन देखा पर्नेछ।
वैकल्पिक समाधानहरूको सूचीबाट "एम्पलीफायर" चयन गर्नुहोस् र पेश गर्नुहोस् बटन थिच्नुहोस्।
2) डीसी समस्यामा डबलक्लिक गर्नुहोस्।
20 वा VG / R बायाँ फिल्डमा र परिणामको दायाँ क्षेत्रमा प्रविष्ट गर्नुहोस्: र सबमिट गर्नुहोस् थिच्नुहोस्।
3) AC समस्या मा डबलक्लिक गर्नुहोस।
जवाफ को परिमाण को लागि, 10 मान फील्ड मा दर्ज गर्नुहोस र ए या एकाइ को फील्ड मा चुन्नुहोस या दर्ज गर्नुहोस। उत्तर को चरण भाग दिन को लागि, XXUMX र डिग्री दर्ज गर्नुहोस उपयुक्त चरण फील्ड मा। पेश गर्नुहोस् थिच्नुहोस्।
4) समस्यामा डबलक्लिक "समस्या निवारण।"
स्क्राउडेरियो प्रतिमासँग बटनहरू मध्ये एक थिच्नुहोस्, R1 लाई स्क्रूडाइभरको साथमा जानुहोस्, क्लिक गर्नुहोस् र सबमिट गर्नुहोस्।
अब तपाईंले सबै समस्याहरू प्रमाणित गर्नुभएको छ, फाईल / बाहिर निस्कनुहोस् र जवाफ दिनुहोस् "परीक्षा सत्रबाट निस्कनुहोस्" संवाद बक्समा।
अन्तमा, चले तपाइँको प्रदर्शनको जाँच गर्न शिक्षक निरीक्षकको कार्यक्रम प्रयोग गरौं।
ध्यान दिनुहोस् कि शिक्षक-पर्यवेक्षक कार्यक्रम संग तपाईं सम्पूर्ण वर्ग पछ्याउन सक्नुहुन्छ किनकि यो एक समस्या सेटको समाधान संग कमाउँछ। तपाईं सञ्जाल वातावरणमा सबै प्रयोगकर्ताहरूको समस्या सुल्झाउने प्रयासहरूको पनि निरीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ।